In Zimbabwe, boys are offered boxing instead of despair | Fox News
Published April 20, 2017 10:48am EDT
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, a young boy is knocked out during a boxing match in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, young boys fight in a boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, children fight in a boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. ﻿Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
CHITUNGWIZA, Zimbabwe – Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive.